Ndị na -emepụta ihe na -ebugharị ikuku na -ebugharị ebugharị - China Portable Air Cooler Factory
Igwe nju oyi Portable
Ohere ikuku oyi
Anyanwụ DC Air Cooler
Atụmatụ atụmatụ jụrụ oyi
Window ọzara evaporative ikuku oyi fan XK-75C
Solar window 12/24v DC evaporative ikuku oyi XK-25/40C
Portable ulo oru evaporative ikuku oyi maka ọrụ ...
obere mmiri na-ekpochapu ikuku igwe oyi XK-15SY
obere Portable ụlọ evaporative ikuku oyi na ice ...
ogbi ulo oru centrifugal mmiri evaporative ikuku co ...
ogbako ulo oru ulo oru uzu ikuku oyi China nwoke ...
Arụmọrụ dị elu zụrụ igwe nju oyi - windo XK -75C ...
Igwe nju oyi kacha mma dị mma - onye na -achọ windo XK -75C ...
XK-13/15SY obere mmiri na-ekupụ ikuku oyi bụ ihe ama ama nke azụmahịa ngwa ngwa ikuku oyi, ọ nwere ike ibelata okpomọkụ site na mmịpụta mmiri na obere oriri. Ọ nwere ụfọdụ atụmatụ dị ka n'okpuru: Ezi Ọdịdị Pụrụ ọhụrụ ihe ahụ plastic, Anti-UV, Anti-ageing, ogologo ndụ ...
Portable ulo oru evaporative ikuku oyi maka ogbako XK-18SYA
XIKOO mere ntọala XK-18SYA na igwe nju oyi ikuku. Nweta nkwalite ikuku ikuku nke ụlọ ọrụ nwere nnukwu tank mmiri 350L, wiil, ọkpọ ikuku ikuku na onye na-agbasa ikuku ka ọ bụrụ XK-18SYA. Yabụ Ọ nwere ike guzoro ma na -ebugharị n'ala, enweghị nrụnye. LCD +njikwa ime obodo, enwere ọsọ 12 dị iche iche iji gbanwee, karịa l ...
obere ụlọ a na-ebugharị ebugharị ikuku oyi na ice Pack XK-05SY
XK-05SY obere ụlọ na-ekpofu ikuku jụrụ oyi na ice Pack XIKOO XK-05SY obere ụlọ na-ekpofu ikuku jụrụ oyi na-ewu ewu, belata okpomọkụ site na mmiri na-ekupụ mmiri. ọ dịkwa obere ma maa mma, enwere njiri mara dị n'okpuru: Ezi Ọdịdị Ahụ ABS ọhụrụ, An ...
evaporative home portable air cooler China rụpụta XK-06SY
XK-06SY ikuku na-ekpo ọkụ ikuku na-ebugharị ụlọ China na-emepụta XK-06SY ngwa nju oyi ikuku ụlọ na-ewu ewu maka ụlọ, ọfịs, ime ụlọ. ụlọ ahịa na ebe ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-ekesa ngwa na-ewere ihe nlereanya a maka azụmaahịa ha, enwere ọtụtụ otuto maka XK-06SY sitere n'aka ndị ọrụ njedebe. XK-06SY ...
18000m3/h 23000m3/h nnukwu ikuku na-ebugharị obere ụlọ ọrụ mmiri ikuku oyi XK-18/23SY
XK-18/23SY 18000m3/h 23000m3/h nnukwu igwe na-eku ikuku mmiri XIKOO nnukwu igwe ikuku oyi na-ebelata okpomọkụ site na ikuku mmiri. Na oriri dị ala. ọ bụ ngwaahịa gburugburu ebe obibi. • Weta ikuku na -ekpo ọkụ XIKOO nwere ụgbụ na -egosi uzuzu iji kpochaa ikuku, mgbe gburugburu ...
Apịtị apịtị apịtị apị na-enye igwe ikuku XK-75/90SY
XK-75/90SY ikuku ikuku na-ekpofu ikuku oyi bụ otu ihe atụ nke nnukwu ikuku ikuku oyi. o nwere akwụkwọ ntuziaka na akpaaka ụzọ abụọ iji tinye mmiri nwere nnukwu tank 120L. Akụkụ ya dị mma dị ka nke dị n'okpuru: pp ihe ọhụrụ XK-75/90SY nwere ahụ PP ihe ọhụrụ, ihe mgbochi UV, mgbochi ịka nká, ogologo ndụ. goo ...
Okwu: 101, Mba. 3, KANGLE ERJIE, XIANCHONG, QIAONAN STREET, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU OBODO, CHINA.